- Porn တွင်သင့်ဦးနှောက် Feminist စာရေးဆရာနောမိ Wolf ကဗြိတိန်လျော့နည်းလိင်ဆက်ဆံနေကြဘာဖြစ်လို့တစ်ခုမငြိမ်ရှင်းပြချက်ရှိပါတယ်: ဘယ်လို porn အသက်ရှင်တော်မူသည်ခေတ်သစ်လိင်ဖျက်ဆီးနေသည်
စုံတွဲများသူတို့ပဲဆယ်နှစ်အကြာလုပ်ခဲ့တယ်ထက် 20% လျော့နည်းလိင်ဆက်ဆံနေကြ
ဒါဟာရေရှည်အကျိုးဆက်များကြောင့်စောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကို desensitises နှင့်ရှိပါတယ်
By နောမိ Wolf က
Published: 19: 44 EST, 11 ဒီဇင်ဘာလ 2013
နယူးစစ်တမ်း: အဓိကလေ့လာမှုဗြိတိန်စုံတွဲအကြောင်းကို 20% ကိုသူတို့ဖွင့်တစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းလုပ်ခဲ့တယ်ထက်လျော့နည်းလိင်ဆက်ဆံဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်
ယောက်ျားလေးသုံးယောက်ပါသည့်ချစ်စရာကောင်းသောမိခင်ကသူမ၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည်ပျော်စရာကောင်းသောလိင်မှုကိစ္စပြည့်စုံသောအိမ်ထောင်တွင်မည်သို့စွန့်ခွာသွားရသနည်းဆိုသည့်အချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သူမကဝမ်းနည်းစွာမေးခဲ့သည်။ ယခုသူသည်သူမ၏သားများကိုမည်သို့ကာကွယ်ရမည်ကိုတွေးမိသည်။
တောက်ပပြီးအထီးကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကသူဟာ 'kink spiral' လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုစိတ်ပူနေတယ်ဆိုတာဝန်ခံခဲ့သည်။ သူကအသုံးများသောအသုံးအနှုန်းကသူ့အားနှိုးဆွရန်အလွန်အမင်းအစွန်းရောက်သောညစ်ညမ်းမှုကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်ခြင်းကြောင့်ဖမ်းမိခြင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းစုံတွဲများကမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းသောကစားခြင်းမရှိဘဲမည်သူမျှလိင်ဆက်ဆံနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတစ်ခုမှလမ်းညွှန်အကြံပေးတစ် ဦး ကကျောင်းသားများအတွက်မည်သည့်နေရာတွင်ကူညီနိုင်သည်ကိုမေးမြန်းသည်။ အများစုမှာအွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲလမ်းနေသောကြောင့်စွဲလမ်းမှုသည်သူတို့၏ကျောင်းစာနှင့်လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
မကြာသေးမီကဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၇၄ နှစ်အတွင်းရှိလူပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်အားမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သောဗြိတိန်နိုင်ငံ၏လိင်မှုဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်လူနေမှုပုံစံဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်းကစုံတွဲများသည်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကမျှတရားမျှတစွာပြုခဲ့သောတစ်လလျှင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လိင်လျော့နည်းနေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသစ်များ - Wolf ၏စာအုပ်အသစ်ဖြစ်သော Vagina: အသစ်အတ္ထုပ္ပတ္တိသည် neuroscience သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုမည်သို့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းပြသည်ကိုဆွေးနွေးထားသည်။
ဒီကိစ္စကိုနှစ် ၂၀ ကျော်လေ့လာနေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုအလေးအနက်ထားရမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ လေ့လာမှုအသစ်အရ၎င်းသည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေသည်။
အကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်, လိင်အင်္ဂါ: တစ်ဦးကနယူးအတ္ထုပ္ပတ္တိ, အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပတ်သက်ပြီး, ညစ်ညမ်းအဆိုးလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုပြသသော neuroscience အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိအပေါ်တစ်ဦးအခနျးကွီးရှိပါတယျ။
လူကြိုက်များသောယဉ်ကျေးမှုသည်ဤလမ်းကြောင်းသစ်ကိုထင်ဟပ်နေသည် - Don Jon ရုပ်ရှင်အသစ်သည်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအဓိကထားသည်။ သူရဲကောင်းသည် Scarlett Johansson နှင့်အတူအိပ်ပျော်နေသော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ခိုးယူခြင်းခံခဲ့ရသည်။ အကြောင်းမှာသူသည်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီး (Johansson!) နှင့်ဘာမျှမပြောသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအတောအတွင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းရုပ်ရှင်များတွင်လိင်မြင်ကွင်းများသည် ပို၍ အကြမ်းဖက်လာသည်။ The Kids Are All Right တွင်ဂျူလီယန် Moore ၏ဇာတ်ကောင်သည်သူမအော်ဂဇင်နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏မျက်နှာကိုရိုက်နှက်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်မိသည်။
မိန်းမငယ်များကငါ့ကိုဆံပင်ဆွဲခြင်း၊ အော်ဂဇင်စ်တွင်လည်ပင်းပတ်လည်ဖိအားပေးခြင်းသည်ပင်ပိုးပန်းရန်လိင်၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်။ မိန်းမငယ်တစ် ဦး ပြောသကဲ့သို့ဤအရာများသည် 'porn clichhes' ဖြစ်သည်။ ဒီအပြောင်းအလဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်မအံ့သြခဲ့ပါဘူး။
ဤပြonနာနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသနအသစ်ကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ပါကအသံများပိုမိုထွက်ပေါ်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး - ဒါကအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေအတည်ပြုတဲ့အမြင်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်သာမန်လူတွေသိပ်နားမလည်ဘူး - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများဖြစ်သည်။
မိုင်းတစ်ဦးကငျြ့ဝတျအနေအထားမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မအရွယ်ရောက် (ထိုရုပ်ပုံများကိုတစ်ဦးရာဇဝတ်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ရက်စက်မှုကျူးလွန်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံကြသည်မဟုတ်လျှင်) မိမိတို့နေအိမ်များတွေရဲ့ privacy အတွက်ချင်သမျှကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်သင့်တယ်ထင်ပါတယ်။
သို့သျောလညျး porn စွဲ၏ neuroscience ရှင်းပါတယ်: စောင့်ကြည့် porn လူများ, အာရုံစိုက်ယုံကြည်မှုနှင့်ကောင်းမွန်သောခံစားမိစေသည်ရာ dopamine ၏ activation, ဦးနှောက်ထဲမှာ neurotransmitter အတွက်ချွန်ထက် spikes ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အဆိုပါပြisနာကဒီရေတိုရေရှည်အာရုံကြောနှိုးဆွရေရှည်အကျိုးဆက်များရှိပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပထမအနေဖြင့်၎င်းသည်သင်မကြာသေးမီကဖွင့်ထားသည့်တူညီသောလိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းများကို desensitisation ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရေရှည်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူသည်အစွန်းရောက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအလွန်တောင့်တသည် - အကြမ်းဖက်မှုနှင့်မညီကြောင်းပုံများသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အလိုအလျောက်အာရုံကြောစနစ်ကိုသက်ဝင်စေသည် - ထိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာသို့ရောက်ရှိရန်။
'မိန်းမငယ်တွေကဒီနေ့ခေတ်မှာဆံပင်ဆွဲတာ၊ အော်ဂဇင်မှာလည်ပင်းကိုဖိအားပေးတာတောင်မှပုံမှန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်' လို့ပြောတယ်။
အကြမ်းဖက်တစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း fetishistic, မညီကြောင်းအဖြစ်ရှုမြင်သို့မဟုတ်ခဲ့ပုံရိပ်တွေယခုညစ်ညမ်းဆိုဒ်များတွင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းခများမှာအဘယ်ကြောင့်ဒီအ acclimatation နှင့် desensitisationdesensitisation ရှင်းပြသည်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအတူသို့ရာတွင်နှင့်အတူအတည်ပြုခဲ့သည်တစ်ဦးကစက္ကန့်အကျိုးသက်ရောက်မှု, အော်ဂဇင်ရောက်ရှိဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်များသည်ယခုအခါရောဂါသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောခွန်အားမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဤ desensitisation ကြောင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခြင်းနေသော၎င်းတို့၏အခက်အခဲများ, ရှင်းပြမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာမျှနှင့်အတူကျန်းမာနုပျိုနှင့်လူလတ်ပိုင်းယောက်ျားတစ်ဦးကပ်ရောဂါအစီရင်ခံရသည်။
ထို့အပြင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေသည့်အသစ်အဆန်းကိုမပေးနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုမောက်စ်ဖြင့်ကလစ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းစေသည့် ဦး နှောက်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်စေသောအသစ်သောအသစ်အဆန်းကိုမပေးနိုင်ပါ။
ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးခြင်းကအမျိုးသမီး၏နှိုးဆွမှုကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်စေနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်။ အကယ်၍ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်မသက်မသာခံစားရပါကသူမနာကြည်းခြင်းနှင့်ဒေါသတို့၏ဖိစီးမှုသည်သူမအားနှိုးဆွနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီးများနှိုးဆွမှု၏အာရုံကြောသိပ္ပံကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါက၊ အမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့၏လည်ပတ်နိုင်သည့်အာရုံကြောစနစ်များ (နှလုံးခုန်နှုန်း၊ အသက်ရှုခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှု) ကိုဖွင့်ရန်အလွန်အမင်းအသက်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ အမျက်ဒေါသ၊ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်မကျေနပ်မှုစသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများသည်အမျိုးသမီးစနစ်အတွင်းရေအေးခဲနေသောပုံးတစ်ပုံးကဲ့သို့ပစ်ခြင်းကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ထိခိုက်: Porn အမျိုးသမီးတွေနှိုးဆွအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ကြောင်းယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေးပါဘူး
ငါသည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများတွင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အမျိုးသားများ၊ အထူးသဖြင့်လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများအားနှိုးဆွရာတွင်အသုံးဝင်သောလိင်ဆိုင်ရာစွမ်းရည်များကိုသင်ကြားခြင်းမပေးသည်ဟူသောအချက်ကိုကျွန်ုပ်သုတေသနများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကနေဒါ Concordia တက္ကသိုလ်မှလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာသိပ္ပံနယ်ပယ်တွင်ရှေ့ဆောင် Dr. Jim Pfaus ကပြောကြားရာတွင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းကိုအသုံးပြုသောအမျိုးသားများသည်သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မဟုတ်ဘဲ 'အာရုံကြောဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု' ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါ porn ။
ဆက်ဆံရေးကျွမ်းကျင်သူနှင့်စုံတွဲများ၏အကြံပေး Michael Kallenbach က 'စုံတွဲတွေဟာအခုဆိုရင်အရင်ကထက် porn ကိုပိုပြီးသတိထားမိလာကြပါပြီ။ လူတိုင်းသည်အိုင်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလိင်မှုဆိုင်ရာကြော်ငြာများနှင့်ပုံရိပ်များနှင့်အမြဲတစေထိုးနှက်ခံရခြင်းနှင့်အတူ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေသည်။
မိတ်ဖက်တစ် ဦး ကမလွှဲမရှောင်သာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သူတို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ထားရှိလိမ့်မည်။ ဒါကမကြာခဏကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ''
နှစ်ခုပါမောက္ခ 800 ယောက်ျားထက် ပို. စစ်တမ်းကောက်ယူရာတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကတက္ကသိုလ်ဆစ်ဒနီ၏လေ့လာမှု, (အဘယ်သူကိုရာခိုင်နှုန်း 85 လက်ထပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားဆက်ဆံရေးရှိကြ၏) အလွန်အကျွံ porn စားသုံးမှုနီးပါးတစ်ဝက်ဖြေဆိုသူများကသတင်းပေးပို့ခဲ့ကွောငျးတှေ့နှင့်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုထိခိုက်ခဲ့ ဆက်ဆံရေး။
အဆိုပါနံပါတ်များကိုသိသိသာသာခဲ့ကြသည်: တစ်နေ့လျှင် porn သုံးခုနာရီ 47 မိနစ်အကြားစောင့်ကြည့်အထီးဘာသာရပ်များရာခိုင်နှုန်း 30 သုံးခုအတွက်တဦးတည်းကသူတို့အလုပ်အားထုတ်မှုထိခိုက်, သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထက်ငါးဦးတဦးတည်းမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။
အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်းတိတ်ဆိတ်င်း၏ထုတ်ကုန်များစွဲလမ်းသဘောသဘာဝကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမအကျိုးဆက်များရှိပါတယ်သောလွတ်လပ်သည့်လစ်ဘရယ်ဝါဒအယူအဆမြှင့်တင်ရန်စိတ်အားထက်သန်သည်အဘယ်ကြောင့်ငါနားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဘဏ္ဍာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်စွဲထဲသို့ယောက်ျားနှင့် ပို. ပို. အမြိုးသမီးမြားကိုဖွင့်ရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်လိင်လွတ်မြောက်: Porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးဖြစ်စဉ်များကိုကျော်ယူပြီးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝဆက်ဆံရေးရေရှည်တည်တံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုသည်လည်းပျက်စီးယိုယွင်းနေသည်
အစိုးရနှင့်သူတို့ကအင်တာနက်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်ချင်တယ်ဆိုရင်အားလုံးအိမ်ထောင်စုအတွက်ရွေးချယ်သင့်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့မထွက်ရမကြာသေးမီက The Daily Mail ကတစ်အောင်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ငါအခါ, ကောင်းသောကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူလူတွေဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုသိရှိရွေးချယ်မှုစေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်, သူတို့သည်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုချင်လျှင်, သူတို့အထဲကရှာအံ့သောငှါသို့မဟုတ်ရှောင်ရှားစေခြင်းငှါ, ပုံရိပ်ဘယ်လိုအကြောင်းကိုပင်ပိုကောင်းရွေးချယ်မှု။
သူတို့၏စွဲလမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်လိုသူ - မည်သည့်စွဲလမ်းမှုအဆုံးသတ်မလဲ - အားစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တဲ့ငါတို့မှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအတွက်ပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုကိုပြန်လည်ရရှိလာပြီးသူတို့ရဲ့ဇနီးများ၊ မိန်းကလေးများနှင့်နှိုးဆွမှုများပြားလာသည်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်ထံစာရေးသူများအနေနှင့်သူတို့လိုအပ်သည်ဟုခံစားရသောအရာတစ်ခုခုမှကရုဏာမခံရရန်စိတ်သက်သာရာရသော်လည်းအထူးသဖြင့်မကြိုက်ကြပါ။
အကယ်၍ porn သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးဖြစ်စဉ်များကိုလွှဲပြောင်းယူပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဆက်နွယ်မှုများကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုယိုယွင်းစေပါကကျွန်ုပ်တို့သည် 'လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှု' ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအားနည်းသည်ဟုထင်ရသည်။
အင်အားကြီးသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစက်ရုပ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်နှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်း၌သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုရရှိစေနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်နေပြီးအထီး ဦး နှောက်တွင်ခဲယဉ်းသည့်ကြိုးအချို့ကိုရက်စက်စွာအသုံးချသည်။